Wonke umuntu uyazi ukuthi umngane othembekile ngaphezu kwanoma yini. Ngokuvamile abantu bathi abangane ungawadingi ngoba kothandekayo. Nokho, eqinisweni, ngoba ozithandayo noma ozithandayo Nathi futhi, abe umngane, ngakho akekho eduze kwabo. umngane Ethembekile ungalokothi udikibale ezikhathini ezinzima, kwakuyobonisa ukuqagela mayelana nendlela uludinga okwamanje. Nokho, inkinga ngokuvamile ukuthi bajwayele ukuthatha abangane ngempela ongabazi, okuyinto esikhathini esithile ekuphileni thina izinto abazijabulelayo. Ubungane - ke kufanele kube ukuphila, hhayi okwesikhashana.
Kungakanani injabulo ukusinika abangane ukuthi angakwazi ukusekela nokusiza ezikhathini ezinzima ngisho prisutstviem.Cheloveku yabo ngokuvamile kakhulu bathanda idealize eziyizungezile, ukubona umngane abantu abangekho ngempela babe. Futhi ngakho enzima isipiliyoni ukukhashelwa phezu kwalabo ungeniswe umphefumulo. Nakuba abantu sithi umngane othembekile akusho benawo, thina lokhu akukhona ngempela uyavuma. Abangane kukhona izidalwa ezingabantu futhi, nabo bonke kunezinzuzo zako kanye nebubi. Futhi inkomba eyinhloko iqiniso ubungane - ikhono lokuthethelela, ngisho nangemva kweminyaka eminingi.
Vele ukuthi kubaluleke ukusekelwa nomunye ezikhathini ezinzima, wabhala abalobi abaningi futhi izimbongi, enesihloko esithi akhashelwa, umngane ezitusekayo, njll .. Kodwa lo mfanekiso ezithakazelisa kakhulu umbhali omkhulu Oscar Wilde sika "Ozinikele umngani" .Pritcha iqala neqiniso ukuthi bezijabulisa umphakathi okusezingeni eliphezulu baqala ukukhuluma ngaba- ubungani. Ngakho, lo duck, le Rat Water futhi Linnet ithi umngane. Futhi umlomo Wilde yokugcina uthumela kithi indaba yakhe. Kwasukasukela kwakukhona uhlobo Insizwa okuthiwa Hans. Ngaphezu kwakho konke yena wasithanda engadini yakhe encane nge izimbali. Ngokwemvelo, umuntu omuhle onjalo waba nabangane abaningi. Nokho, cishe lokhu kwakubhekwa esiseduzane Big Miller. Naphezu kweqiniso lokuthi wayecebe kakhulu, ubungane bakhe kwakuwukuthi njalo uma ukukhetha engadini Hans isixha enkulu izimbali, ukuqoqa izithelo ngaphezulu, uye endlini yakho. Futhi Ngachaza ukuthi lokhu bonke zokugaya ukuthi abangani bangempela kufanele ihlukaniswe bonke. Nokho, lokhu akusho ukuthi ukusiza Hans, ngabona naye amakhaza asebusika, noma umeme Hans aye emzini wakhe, ukuze ubungane babo ayizange bahlupheka ngenxa nomona abampofu uhlobo ngisengumfanyana. Spring weza, Miller watimisela kuya Hans for izimbali. umngane othembekile Hans wanika Miller lonke nobhasikidi izimbali, kodwa uya ukuzidayisa akubuyise ngokukuhlenga ibhala yami, ngoba ebusika, ayenakho Friend, futhi wasibeka. Rich Miller wathi uzomnika yakhe ibhala eziphukile, okuyinto Hans ngenjabulo uya ukulungisa, ngoba akudlayo brand ibhodi elisha. Nokho, "abathembekile" le miller wamcela ukuba silungise kophahla lwakhe kuleli bhodi. Hans wavuma, futhi kusukela ngaleso sikhathi zaqala ukwenza izicelo kakhulu, futhi umsebenzi akwenza aphonse engadini yakhe. Decoupling eduze kakhulu. ingane likaMiller wayegula futhi wabuza Hans ukuya kudokotela, naphezu kwezinkinga elalibhekene bahlaselwa isiphepho esinzima. Futhi ngizisola ngisho flashlight, ngoba ingane encane ingakwazi bayishaya, futhi ngokuphelele entsha. Futhi Hans, naphezu sezulu esibi, kodwa wakwenza kudokotela, kodwa wafa ziyabuya. Emngcwabeni ababesosizini bompofu zonke ngoba kwakukuhle kakhulu futhi kakhulu zonke uyakuthanda kuye. Kodwa ikakhulukazi lusizi Miller, ngoba lalinjalo Hans umuntu abaseduze emhlabeni, kwadingeka izinga umngane futhi wayeya amnike ibhala.
Tale-mfanekiso Wilde kungenzeka ukuthi wafika nganoma iyiphi indlela isihloko lesi sihloko. Kufanele bakwazi ukuhlukanisa abangane beqiniso kusukela labo ezicashe kulokunye futhi uyawuthanda umusa. Futhi laba bantu, ngeshwa, liba nokuningi. Abantu ukhohlwe ukuthi emhlabeni, kodwa izithakazelo zabo, kukhona ubungani, uthando, ukubuya. Phela, labo bayakwazi sokuthi sikuthokozele konke ngezimfanelo ngenhla kungaba ngokuthi abangane beqiniso.
Wenzenjani ukufakazela umfana ukuthi ngimthanda? Thina ukuphendula umbuzo
Uyini Balneotherapy inzuzo?
Nehisopi imbiza: zokutshala nokunakekela, sikhula kusukela imbewu
"Ribomunil" izingane: ukubuyekeza nezincomo